Tsenan’ny Bazary Be Toamasina
Vinavinaina amin’ny 1 septembra ny fisokafany ho an’ny mpanjifa
Telo volana latsaka sahady izay no nitokananana ny tsenan’ny bazary be mbola mandeha ny fandaminana hiarahana amin’ireo mpivarotra ao amin’ny tsenan’ny bazary ben’ny Toamasina.
Araka nambaran’ny Rtoa NAROVE Soamamy, filoha lefitra voalohan’ny delegasionina manokana ny tampontananan’ny Toamasina fa ao anatin’ny fandrindrana ny tompon’andraikitra, fantatra ihany koa fa misy ny komisionina manokana izay ao anatin’ny filankevitra kominaly, isan’izany ny talen’ny tsena. Fantatra ihany koa fa misy ny fandraisana an’ireo solontenany mpivarotra isantsokajiny toy ny mpivarotra fanaka, mpivaro-daba, mpivaro-kena, sns, mba hijerene akaiky ny zavatra ilana fanamboarana araka izay ilain’ny mpivarotra.
Na eo aza ny fahavitan’ny tsena dia mbola misy ny fanamboarana kely tsy maintsy atao mba ampiasana azy arakin’ny filana sy fampiasan’ny tsirairay, na ny mpivarotra na ny mpanjifa.
Fantatra ihany koa fa misy ny lalana sy fitsipika mifehy amin’ny fanajana ny fahadiovan’ny tsena vaovao izay iarahana amin’ny Commune Urbaine Toamasina. Nisy ihany koa ny fangatahan’ireo mpivarotra ao amin’ny Art Malagasy amin’ny fanafoana ny tafon’ny tsenan’izy ireo ary ihany koa fametrahana jiro hanazava ny tsena.
Noeken’ny tompon’andarikitra ny fangatahan’izy ireo ary nanome toky ny ny filoha lefitra ny Fikambanan’ny Bazary be Miray (FIBAMY) amin’ny fampiasana ny tsena vaovao tsy ho ela, araka ny vinavina dia amin’ny 1 septembre ho avy izao no fisokafan’ny Bazary be hoan’ny mpanjifa.
(70) Prud′Homme RAKOTOSON : 14-08-2014 - 12:30